Guddiga Doorashoyinka Galmudug oo sheegay in Xildhibaanadii Gadoodsanaa ee Ahalusunna ay la xaliyay – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Guddiga Doorashoyinka Galmudug oo sheegay in Xildhibaanadii Gadoodsanaa ee Ahalusunna ay la xaliyay
Gudoomiyaha Guddiga Doorashadda Madaxweynaha iyo Madaxweynaha Maamulka Galmudug ayaa sheegay in la xaliyay tabashadii ay qabeen xubnihii Ahlusuna Waljameeca ee Guddiga kamid ahaa kuwaasi oo dhawaan gadooday.
Maxamed Xuseen Tahliil (Calool Galeel), Gudoomiyaha Guddiga Doorashadda Madaxweynaha iyo Madaxweynaha Maamulka Galmudug oo la hadlay idaacadda Simba ee Magaaladda Muqdisho ayaa sheegay In kulan laga yeeshay arintaas islamarkaana la xaliyay.
Waxa uu sheegay in kala arakti duwanaasho ay imaanaysa marba hadii shaqo la qabanaayo,islamarkaana la xaliyay, dhawaana la bilaabi doono shaqooyinkii guddiga uu qaban jirey.
Dhanka kale Gudoomiyaha Guddiga Doorashadda Madaxweynaha iyo Madaxweynaha Maamulka galmudug ayaa kaga digay xubno ku sugan Dhuusa-mareeb oo doonaya in ay faragaliyaan guddigooda,wuxuuna sheegay in loo baahan in guddigooda loo madax baneeyo shaqadooda.
Hadalka Gudoomiyaha Guddiga Doorashadda Madaxweynaha iyo Madaxweynaha Maamulka galmudug Maxamed Xuseen Tahliil( Calool Galeel), ayaa imaanaya xili xubnihii ahlusuna ee Guddiga kamidka ahaa ay isaga baxeyn, islamarkaana guddoon cusub ay doorteen,waxayna jadwal ay dhawaan soo saareen ku sheegeen in 6-ka bisha soo socoto ay dhici doonto Doorashadda Madaxweynaha iyo Madaxweynaha Maamulka Galmudug.
Dhismaha Maamulka Galmudug ayaa waqtiga badan qaatay,waxayna Xukuumada Soomaaliya muddo ku dhow 8-bilood waqti galisay dhismaha Maamulka Galmudug.